Shiro Ozaki Chirangaridzo Horo
Chiratidziro muOzaki Shiro Chirangaridzo Horo
Iwe unogona kudzoreredza pekugara pekugara kwawakagara kwemakore gumi apfuura uye uchicherechedze kubva kunze.Mukuwedzera kune zvinyorwa (zvinyorwa) uye mabhuku, zvinhu zvinofarira zviri kuratidzwa.
2021 / 10 / 01 SanganoRuzivo magazini "Art Menyu" Kubvumbi / Chivabvu chinyorwa chakaburitswa
2021 / 10 / 01 SanganoOta Ward Cultural Arts Ruzivo Pepa "ART nyuchi HIVE" vol. 8 rakaburitswa.
2021 / 06 / 10 ZvimweHydrangea iri kuzara zvizere.
2021 / 04 / 20 Zvimwe"Chirangaridzo Horo Cherechedzo" (Nha. XNUMX) yakaburitswa
2021 / 03 / 01 SanganoPeji repamutemo repamutemo rakavandudzwa
Iyo panoramic yekuona zvemukati uchishandisa 360 degree kamera.Unogona kuona kushanya chaiko kuOzaki Shiro Chirangaridzo Horo.
Anoshanda uye ekuratidzira makamuri eShiro Ozaki Chirangaridzo Horo, zvinhu zvaShiro zvaanofarira, uye pikicha yemifananidzo yeiyo yekuyeuchidza imba.
* Iwe haugone kupinda muchivako
Yakavharwa kwenguva pfupi